ကျွန်ုပ်၏အကြောင်း - Ikkaro
ငါ့နာမ Nacho ဖြစ်ပြီးငါကစက်မှုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်၏ UPV (ဗလီဆန်နီးယားပိုလီတက္ကနစ်တက္ကသိုလ်)
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းစိတ် ၀ င်စားစရာများ၊ အချိန်နှင့်ငွေကြေးမပြည့်စုံမှုတို့ကြောင့်အမြဲတမ်းစိတ် ၀ င်စားသောအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးပါမည်။
ikaro ၂၀၀၆ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်မွေးဖွားခဲ့သည် ပျံဝဲအရာဝတ္ထု; တံခှနျ, စည်သူလွင်, ရေဒီယိုထိန်းချုပ်ကိရိယာများ, etc
ထို့ကြောင့်၎င်း၏အမည်ကိုဆက်စပ် Icarus el Daedalus ၏သားအမွေးအတောင်များနှင့်ဖယောင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတောင်ပံများဖြင့်သူတို့ထောင်မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ခရီးစဉ်တွင် Icarus သည်သူ၏တောင်ပံများရှိဖယောင်းအရည်ပျော်သည်အထိနေကို ဦး တည်တက်လေသည်။
၎င်း၏အစောပိုင်းကာလများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောင်းပါးအနည်းငယ်ရေးသားခဲ့သည် စွန်နှင့် boomerangs အကြောင်းသတင်းအချက်အလက် ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုနှစ်နှစ်နီးပါးစွန့်ခွာခဲ့ပြီးစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သည် မည်သို့လုပ်ရမည်ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်မည်သို့လုပ်ရမည် နှင့်သိချင်စိတ်အမျိုးမျိုးနှင့် အိမ်စီမံကိန်းများ.
သင်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသင့်တွင်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ section ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်ရေးသားလိမ့်မည်။
သမိုင်း Ikkaro Logo
၏စာရေးဆရာ ikkaro လိုဂို ထံမှ Alejandro ပိုလန် (alpoma) ဖြစ်ပါတယ် ခေတ်ကုန်သောနည်းပညာhttps://en.99designs.es/logo-design/contests/logo-blog-experiments-7757/entries မှတစ်ဆင့်ကျင်းပသောတံဆိပ်ပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရသည့်
များသောအားဖြင့်လိုအပ်သောစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် ၀ င်စားမှုရောနှောမှုကိုဖော်ပြလိုသောကလေးဆန်သောထိတွေ့နိုင်သောဒုံးပျံ အိမ်တီထွင်မှုအမျိုးမျိုးကိုသယ်ဆောင်လာသည့်အခါ
Ikkaro နှင့် ပတ်သတ်၍ သင်သိလိုပါသလား။
အစကန ဦး ပျံသော gadget များအကြောင်းပြောဆိုရန် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် DIY၊ gadget များ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အသေးအဖွဲကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအားလုံးကိုအလျင်အမြန်ထုတ်ဖော်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကဏ္မှာဝဘ်အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်ကတည်းကဆောင်းပါးတွဲတွေကိုစုဆောင်းတယ်၊ ပိုနည်းလာတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကိန်းဂဏန်းများ၊ စီမံကိန်းများ၊ အတွေးအခေါ်များ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ဖိုရမ်ကိုပိတ်လိုက်သည့်အခါ၊ returnedပြီလပြန်လာပြီးပိတ်ရန်၊ ဟားခါး၊
ပြီးတော့ ၁၀ နှစ်ကျော်တာကများစွာသောသူတို့ကိုပေးဖို့၊ များစွာသောအရာတွေကိုစမ်းကြည့်ဖို့၊ အလုပ်မလုပ်တာနဲ့ဘာတွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုပေးတာပါ။ ဒါမှမဟုတ်အချိန်မသင့်တော်တဲ့အရာတွေကိုပိတ်လိုက်ရုံပဲ။
အကယ်၍ သင်သည်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့မှကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာရာကိုအနည်းငယ်လေ့လာပါ၊ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါက၊ မမေးရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် ။-)
ဤအပိုင်းသည်ယနေ့အဓိပ္ပာယ်ရှိမရှိသို့မဟုတ်အရာအားလုံးကိုကောင်းစွာချည်ထားခြင်း၊ တစ်ခုတည်းသောပို့စ်တစ်ခုတွင်ပိတ်ထားခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကအဆင့်မြှင့်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကပိုကောင်းသည်လားကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါ ၁၂ နှစ်အတွင်းနှင့်အီကာနို၏စူပါဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖန်တီးလျှင်ဤအချက်ကိုလှည့်ဖျားပေးပါလိမ့်မည်
ဒီမှာငါတို့သမိုင်း၊ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ ၀ န်ထမ်းတွေရှိတယ် ... ငါတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာပဲ
ဤသည် Deddalus တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် DIY တွင်အထူးပြုထုတ်ဝေသည့်အိမ်သိပ္ပံပညာနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပုံ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားတွင်ဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများမရှိခြင်းသည်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည် DIY၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစာအုပ်များနှင့် monographsအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်နှင့်အတူ။
စာအုပ် / monographs အားလုံးသည် DRM အခမဲ့ဖြစ်သည်
၀ ယ်ယူထားသောမည်သည့်စာအုပ်အတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေသည့်မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ပုံစံ (pdf, epub, mobi, etc) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
တစ် ဦး ချင်းရောင်းအားအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စျေးပေါနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ထုတ်ဝေသူမှသတင်းအားလုံးကိုသတိပြုမိလိုလျှင်။ Deddalus ကိုရိုက်ပြီးသတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းပါ။
Ikkaro တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဓိကအကောင့်ဖွင့်ထားသည် လူမှုရေးကွန်ရက်များ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကွန်ရက်အားလုံးတွင်တူညီသောစာမူများမတင်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်းတွင်ဂေဟစနစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောအကြောင်းအရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်သည်။
Google က Plus အား
သင်ပါ ၀ င်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်လွဲချော်ပြီးအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုအကြံပြုလိုလျှင်။ မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ။
၇ နှစ်ကျော်နေထိုင်စဉ်အတွင်း၊ ဤဘလော့ဂ်သည်အထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်တွင်များစွာပြောင်းလဲမှုများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း Drupal နှင့်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်သည်။
ဤအချိန်အမှုအရာပိုမိုလေးနက်ပါပြီ။ Content manager ကို Drupal ကနေပြောင်းလိုက်ပြီ WordPress.
Ikkaro ၏နောက်လိုက်များစိတ် ၀ င်စားသည်မှာအရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်ရောင်းချနေဆဲဖြစ်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းရခြင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အကြောင်းပြချက်များသည်ဆောင်းပါး၏အဆုံးသို့သွားသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောတိုးတက်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများဖြစ်သည်။
ယခု မှစ၍ အဘယ်သို့မျှော်လင့်နိုင်သနည်း။
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်များစွာကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ယခုမှ စ၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ဆက်လက်၍ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည် ဆောင်းပါးများကိုထုတ်ဝေပြန်လည်စတင်.
ဆက်လက်ထုတ်ဝေရန်အပြင်ယခုနှစ်အတွင်းစိတ်ကူးသည်ဖြစ်လိမ့်မည် ဘလော့ဂ်၏ "lazier" အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၎င်းကိုပြန်ရေးရန်၊ မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်စာရင်းပြုစုထားပါက၎င်းတို့ကိုမွမ်းမံရန်။ Ikkaro ဆိုသည့်ဆောင်းပါးသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။
အထင်ရှားဆုံးအရာကသေချာသည် မှတ်ချက်များပြန်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျနော်တို့ထုတ်ဝေမတိုင်မီသူတို့ကနေဆဲဖြည့်နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်းလွဲချော်ကြောင်းခြောကြီးမြတ်သတင်း။
ငါတို့သည် မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်ဗားရှင်းအသစ် အရမ်းအေးတယ် စုံစမ်းသည် ;-)
ရွှေ့ပြောင်းနှင့်အတူ ကျနော်တို့ဖိုရမ်ကိုဖျက်လိုက်ပါပြီ လူတိုင်းကိုရေးခွင့်ပြုပြီးဘာမှမပံ့ပိုးပေးသည့်အချိန်မှလာသည့်စာမျက်နှာများစွာလည်းရှိသည်။ ကျနော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသူတွေကိုထားခဲ့တယ်။
ငါတို့သွားမယ် အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဆောင်းပါးများအားပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်တိကျသောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများဖန်တီးခြင်း အကြောင်းအရာကိုပိုမိုစနစ်တကျဖော်ပြရန်နှင့်ဆိုက်၏အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်လွယ်ကူစေရန်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်တိုးတက်ရန်အသေးစိတ်များစွာရှိသည်။ သင့်အတွက်ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည်။ အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောဆိုဒ်များအတွက်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ သင်ပြtheနာများကိုသတင်းပို့ပါ ငါကတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှကျွန်ုပ်တို့ကိုမလိုက်နာပါကသင်လုပ်နိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုစီတွင်ကွဲပြားသောအကြောင်းအရာများကိုပေးသည်။ :)
ငါတို့သည်လည်းရုံစတင်ခဲ့သည် DIY ကိုရည်စူးသည့် flipboard မဂ္ဂဇင်း.
Drupal မှ WordPress သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်း
ဤအရာအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက်။ ဟုတ်တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါချစ်ရတဲ့ Drupal ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ဘလော့ဂ်သည် Drupal 5,6နှင့်7မှတဆင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (အမှားကြီးတစ်ခု) ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့်သင်ယူခဲ့ရသည်
နောက်ဆုံးတွင်မန်နေဂျာများသည်ကိရိယာများဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောကိရိယာကိုအသုံးပြုရမည်။ အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောအရာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိရိယာများနှင့်သူတို့ကမ်းလှမ်းသည့်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည်။ WordPress သို့ပြောင်းပါ
၏ Know- ဘယ်လို၏အားသာချက်ယူ ယနေ့ဘလော့။ ငါဒီမှာအလုပ်လုပ် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘလော့ဂ် ၂၀၀ ခန့်ကိုစီမံထားသည်။ အားလုံးသည် wordpress ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ရည်ရွယ်သောကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများရှိ developer များ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များနှင့်အထူးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ သင်ပြောချင်သည့်အချက်များမှာဤအသိပညာအားလုံးကိုဖြုန်းတီးရန်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သည်။ Drupal မှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ယူဖို့ငါ့ဘဝကိုရှာဖွေရမယ်။
အကြောင်းမှာစပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်မျိုးစလုံးတွင်အချက်အလက်နှင့်အကူအညီများပိုများနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် Drupal အတွက်အချို့သောအရာများနှင့်သင့်ကိုကူညီရန်များစွာလိုအပ်သည်။ ငါဟာပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်မဟုတ်၊ ဒီဇိုင်နာလည်းမဟုတ်၊ ဒီလိုမျိုးအရာအားလုံးမဟုတ်ဘူး၊ ဘလော့ဂ်တိုးတက်ဖို့ငါ့ဘဝကိုရှာဖွေရတယ်။ ငါ Drupal ကိုချစ်ဆဲဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားကတော့ wordpress ၏ရိုးရှင်းမှုသည်၎င်း၏မျက်နှာသာရစေသောအချက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါရွှေ့ပြောင်းနှေးကွေးခြင်းနှင့်နာကျင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Drupal မှ WordPress သို့ပြောင်းလဲမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ အသုံးပြုသူတစ် ဦး တည်းသောဘလော့ဂ်များမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများဖြင့်အမြဲတမ်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ wordpress 5.x ကိုအမြဲတမ်း Drupal 6.x နဲ့ 3.x အမြဲတမ်းပါ။ ဒါပေမယ့် Drupal7နဲ့အတူကျွန်မမှာပြproblemsနာတွေရှိခဲ့ပြီးအဲဒါတွေကိုခေါင်းစဉ်များ၊ စာရေးသူများနှင့်ရောထွေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိသော urls များကိုစီမံခြင်းအပြင် အလိုအလျောက်။
ယနေ့ည ၀၀.၀၀ နာရီတွင်ပြိုင်ပွဲအတွက်လိုဂိုများပေးပို့ရန်နောက်ဆုံးရက်သည်ပြီးသွားပြီးသူတို့ကငါတို့ကိုဆက်ပို့နေသေးသည်။
အမှန်တရားကတော့စေလွှတ်သူများစွာဟာအရမ်းတော်တယ်၊ ငါဘယ်လိုလဲ၊ ဘယ်လိုချင်လဲလို့ငါမေးချင်တယ်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်ဘလော့ဂ်၊ ဖိုရမ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏အနည်းငယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
မင်းကိုငါ ၈ ချန်ထားခဲ့ပြီးပြီ။ ငါအကြိုက်ဆုံးပဲ။ ၎င်းတို့သည်အက္ခရာစဉ်အရမဟုတ်ဘဲ ဦး စားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းမဟုတ်ပါ
5.- ဂျေမီ Shoard
6.- ဂျေမီ Shoard ရဲ့ဒုတိယ
Lady- Ligeia 7.-
8.- Siah ဒီဇိုင်းများ
အကယ်၍ သင်ဤတွင်မရှိသောအရာတစ်ခုကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းကိုမှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။ မူအရအခြေခံအားဖြင့်၎င်းတို့အနက်မှအနိုင်ရသူကိုရွေးလိမ့်မည်။
28:2014 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 23
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဘယ်လိုထုတ်ဝေမလဲ သို့မဟုတ်ငါပို့စ်အဘို့အသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
26:2014 pm မှာပြီလ 11, 22
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့်နာမည်ဟိုဆေးလူးစ်ပါ။ တီထွင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ အမြဲတမ်းအရာရာ၊ အတွေးအခေါ်များစသည်တို့ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေပါတယ်။ အိမ်မှာရေပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်နှင့်အိမ်သာအတွက်ရေမှုတ်ခြင်းကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တီထွင်မှုအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် ငါ့ကိုယ်ပိုင်စက်။ Marcianitos နှင့်ကျွန်ုပ်စတင်ရန်မရှိသေးသောအတွေးအခေါ်အချို့မှာ၎င်းတို့နှင့်ကောင်းစွာအာရုံစူးစိုက်မှုမရှိသောကြောင့်ဤနေရာတွင်သူတို့ကို ဖော်ပြ၍ မျှဝေနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
19:2016 pm မှာဇန်နဝါရီလ 9, 52
မင်္ဂလာပါ။ ခင်ဗျားကောင်းတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒိုမီနီကန်သမ္မတဆီမှစာရေးတာ။ တကယ်တော့ဒီ CNC စက်စီမံကိန်းကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်။ ငါကအရပ်သားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကက်ဘိနက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဒီဇိုင်းကိုစွဲလမ်းနေတယ်။ ငါပြင်ဆင်နေပါတယ် ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီနှင့်စက်ယန္တရားအားလုံးနီးပါးကိုကျွန်ုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုသက်သေပြလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စက်ယန္တရားအားလုံးကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ငွေကြေးပြproblemနာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကတည်းက၎င်းကိုအမြဲတမ်းလုပ်ချင်ခဲ့သည်။ ငါကသတ္တုဗေဒကိုအထူးလုပ်တယ်။ ငါ့စက်တွေအားလုံးငါ့လက်မှတ်နဲ့လုပ်ရတယ်။ တဖန်သင်တို့ကိုငါကျိန်ဆိုသည်ကား, ကောင်းပြီကောင်လေး ... ယခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆင်းကုန်ကြကုန်အံ့ ... ငါစက်မှုဇုန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းစက်ကိုလုပ်လိုလျှင်မည်သည့်မော်တာအမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။ -220v ။